Coenzyme Q10 ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ ကြင်နာ
1. ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Coenzyme Q10
2. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: 10% -98%
3. အသွင်အပြင်: လိမ္မော်ရောင် - အဝါရောင်အမှုန့်
4. ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်: 25kg / စည်, 1kg / အိတ်
6. ခဲအချိန်: ညှိနှိုင်းခံရဖို့
၇။ ထောက်ပံ့နိုင်စွမ်း - တစ်လလျှင် ၅၀၀၀ ကီလိုဂရမ်။
Coenzyme Q10 (ubidecarenone, CoQ10 နှင့် Vitamin Q ဟုလည်းလူသိများသည်) သည် ၁၊ ၄-benzoquinone ဖြစ်ပြီးစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တက်ကြွမှုကိုတိုးတက်စေခြင်းတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ playing မှပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည် mitochondria ရှိအီလက်ထရွန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွင်းဆက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအေရိုးဗစ်ဆယ်လူလာအသက်ရှူမှုတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်နှလုံးနှင့်အသည်းကဲ့သို့သောစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်အမြင့်ဆုံးသောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများသည် CoQ10 ပြင်းအားအများဆုံးဖြစ်သည်။
၁။ အိုမင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်ခြင်း - အသက်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကျဆင်းခြင်းသည်အခမဲ့အစွန်းရောက်များနှင့်လွတ်လပ်သောအစွန်းရောက်တုံ့ပြန်မှုများ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ coenzyme Q10 သည်အစွမ်းထက်သောဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်သူတစ် ဦး အဖြစ်သို့မဟုတ်ဗီတာမင် B6 (pyridoxine) နှင့်ပေါင်းစပ်။ လွတ်လပ်သောအစွန်းရောက်များနှင့်ဆဲလ် receptors များကိုတားဆီးသည်။ ဆဲလ်ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့် microtubule ဆက်စပ်ပြုပြင်မွမ်းမံစနစ်၏လှုပ်ရှားမှု, ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်အားကောင်းလာ, အိုမင်းနှောင့်နှေး။
(၂) ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုဆန့်ကျင်။ ပြင်းထန်သောနာတာရှည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု (CFS) - ကိုယ်ခံအားစနစ်အားနည်းခြင်း၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော anti-fatigue effect များ၊ coenzyme Q10 ဆဲလ်များကိုကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်သည်ကျန်းမာသန်စွမ်းမှုနှင့်ပြည့်ဝသည်။ ဦး နှောက်ပေါများသည်။
၃။ အလှအပ - coenzyme Q10 သည်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အရေပြားနှင့်အလင်းအားအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးမျက်စိကိုဝန်းရံနေသောအရေးအကြောင်းများကိုလျှော့ချပေးနိုင်သောကြောင့် coenzyme Q10 သည်အရေပြားကြီးထွားမှုအဆင့်ကိုတိုကင်ပိုရောလ်တွင်ပါဝင်သောတိုတိုဖွန်ဓာတ်၏ဓာတ်တိုးနိုင်မှုအဆင့်အတန်းသည်တုရိုစလင်း၏တိကျသောဖော့စဖရိုရယ်လ်၏အကူအညီကိုစတင်နိုင်ပါသည်။ DNA ကို oxidative ပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ရန် kinase, လူ့အရေပြား fibroblast collagenase ဖော်ပြချက်ကို UV irradiation တားစီးခြင်း၊ အရေပြားကိုအနာမှကာကွယ်ပေးခြင်းသည်သိသိသာသာ antioxidant, anti-aging effect ရှိသည်။
4. coenzyme Q10 အောက်ပါလက်တွေ့ကျကျရောဂါများကိုကုသရန်အတွက် - နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများ - ဗိုင်းရပ်စ် myocarditis၊ နာတာရှည်နှလုံးမလုံခြင်း။ ထိုကဲ့သို့သော: ဗိုင်းရပ်စ်အသည်းရောင်အသားဝါဘီ, subacute Hepatic necrosis, နာတာရှည်တက်ကြွအသည်းရောင်အသားဝါဘီအဖြစ်အသည်းရောင်ရောဂါ။ ကင်ဆာရောဂါကိုဘက်ပေါင်းစုံကုသခြင်း - ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုလျော့နည်းစေပြီး၊
ရှေ့သို့ Clerodendranthus spicatus ထုတ်ယူမှု
နောက်တစ်ခု: Coleus forskohlii ထုတ်ယူ
Verbena Officinalis ထုတ်ယူ
White ကမိုးမခအခေါက် Extract, ဝါးထုတ်ယူ, Lagerstroemia Speciosa ထုတ်ယူမှု, Avena Sativa Beta Gucan, Picrorhiza Kurroa ထုတ်ယူမှု, Hypericum Perforatum ထုတ်ယူ,